Mareykanka: “Duqneyntii Gaalkacyo cillad mid ka mid ah Saldhigyadeenna ku timid ayaa sababtay.” | Kobciye24.com
Mareykanka: “Duqneyntii Gaalkacyo cillad mid ka mid ah Saldhigyadeenna ku timid ayaa sababtay.”
Dowladda Mareykanka ayaa waxaa ay war ka soo saartay Duqeyn dhawaan Ciidanka Maamulka Galmudug ay ugu geysteen degaanka Jeexdin ee Duleedka Magalaada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.
Sargaalka u hadlay Dowladda Mareykanka ayaa sheegay in laga soo billaabo 9kii Bishii September ilaa 7dii October, ay cillad qabsatay Saldhigga ay ka duulaan Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ,kaas oo ku yaalla Gobolka Nevada ee Galbeedka Mareykanka.
Waxaa uu sheegay in adeegga daara damiyaha ee laga hago gudaha Internetka ay cillad ku timid,islamarkaana sababtay in duqeymo qaldan ay Dolwadda Mareykanka ka fuliso Waddamada Soomaaliya,Suuriya iyo Afgahanistaan.
Afhayeenka u hadlay Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka gaar ahaan Ciidanka Cirka oo lagu magacaabo Malinda Singleton,ayaa sheegay in Fayrus uu galay Kombuutarrada laga hagayay Diyaaradaha islamarkaana ay dhacday duqeymo aan ku talagal ahayn.
Diyaaradaha kale ee Ciidanka ee ay ka xeeyaan Duuliyayaasha ayuu sheegay in aysan saameyn ku yeelan Fayriska asiibay kuwo duuliye la’aanta ah.
Saddexda duqeyn ee qaldamaya ayaa waxaa ay ku kala dhaceen Ciidamada Dowladda Suuriya oo halgoob lagu dilay 62 Askari,Ciidanka Maamulka Galmudug ee Soomaaliya oo iyana lagu dilay 22 Askari iyo 16 Qof oo shacab ah oo lagu dilay Dalka Afghanistaan.